Iincwadana ezinemifanekiso: into eziyiyo kunye nemizekelo yezona zisetyenziswa kakhulu nezibalaseleyo | Abadali be-Intanethi
Ukuba bekufuneka siqaqambise nayiphi na intengiso okanye into enika ulwazi kwaye inceda ukuyiprojekthi ukuze ifikelele inani labasebenzisi, ngokuqinisekileyo bekuya kuba ziincwadana ezinemifanekiso. Kwicandelo loyilo lwegraphic, iincwadana ezinemifanekiso ziyinxalenye yoyilo kunye noyilo lwentengiso, kwaye aziyondlela elungileyo ye-intanethi kuphela, kodwa zikwakhona kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla.
Yonke imihla, iinkampani kufuneka zikhuthaze iimveliso zazo kwaye yiyo loo nto kubalulekile ukwazi ukuba zenziwa njani kwaye zeziphi iindlela ezikhoyo zokuyenza. Kule post, siza kuthetha nawe kwakhona malunga noyilo lokuhlela kodwa hayi njengeyona nto iphambili, kodwa njengenye into.
Yiyo loo nto umsebenzi woyilo okanye umyili ugxininiswa ngakumbi yonke imihla kuba kubalulekile ukwazi kwangaphambili ukuba bayintoni na kuyilo lwabo olulandelayo. Ngenxa yesi sizathu, siza kuchaza ukuba yintoni incwadana enemifanekiso efundisayo kwaye siza kukubonisa imizekelo emininzi yezinye zazo. Siza kukubonisa ukuba nganye nganye yeyantoni kunye nesizathu sobukho beentlobo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kwayo.
1 Incwadana enemifanekiso
1.1 Iimpawu ezilula
2 Imizekelo yeencwadana
2.1 I-Typology 1
2.1.1 Ukusonga umnyango
2.1.5 Iiflaya okanye iiflaya
3 IiNkqubo zoYilo lwencwadana
Umthombo: ushicilelo lwempambano
Incwadana enemifanekiso efundisayo ichazwa njengohlobo loxwebhu okanye ifayile ethi, njengoko igama layo libonisa, ibonakala ngokuqulatha ulwazi kunye nezibonelelo kwaye yazisa umsebenzisi malunga nento. Umsebenzi wayo ophambili kukudlulisa umyalezo kumamkeli, yingakho siyifumana kwiiarhente ezahlukeneyo okanye kwiinkampani okanye nakumacandelo ahlukeneyo, kuba nganye yezi nkampani yazisa umxhasi ngemveliso yazo kunye nexabiso lenkampani.
Kungenxa yoko le nto kule mihla yethu singqongwe zizo zonke iindidi zeencwadana ezinemifanekiso ezisixelelayo. Kwilizwe leshishini okanye nakwintengiso yedijithali, iincwadana zenzelwe ukukhuthaza uphawu kwaye luyinxalenye yendlela yokuthengisa. Ngaba kukho ubudlelwane obusondeleyo phakathi kwentengiso, uyilo kunye nencwadana? Ewe ewe, inyani kukuba ubudlelwane busondele kakhulu kuba enye ayinakuba yinto ngaphandle komnye.
Ubukhulu becala iincwadana zolwazi. zidla ngokuyilwa ngendlela yokuba ziqulathe isicatshulwa esaneleyo ukuze umsebenzisi abambe ulwazi oluyimfuneko. Yingakho into eqhelekileyo kwincwadana kukufumana isihloko esiphambili, uphawu lwe-brand, isihlokwana kunye nombhalo wesibini ohamba kunye nalo lonke ulwazi. Uninzi lwazo luqulethe ezinye iinkcukacha ezinomdla kumxhasi, njengenombolo yefowuni yenkampani, ifeksi okanye i-imeyile, okanye inethiwekhi yoluntu ebhalisiweyo.
Ukuba sigxininisa umsebenzi womyili, incwadana iqhele ukwenziwa zizinto zegraphic njengemifanekiso, ii-ayikhoni, iifonti zokuyila, iimilo zejometri, imibala, imizobo, njl.njl. Zonke ezi zinto zezo zibamba ingqalelo ngendlela ebonwayo ngakumbi kumamkeli.
Uninzi lwazo luhlala lunobungakanani obubonakalisa kubo, oko kukuthi, iinkampani ezininzi zisebenzisa iifomathi ezinkulu ukubamba ingqalelo yoluntu, ngale ndlela. ubukhulu besayizi, ulwazi oluninzi umthengi alufumanayo malunga nenkampani.
Ngokuxhomekeke kubukhulu bayo kunye nokusetyenziswa esifuna ukunika incwadana yethu yolwazi, ngokuqhelekileyo ihlulwe ibe ziindidi ezimbini ezahlukeneyo, nganye yazo yenziwe ngeempawu ezahlukeneyo kwaye ngokuqhelekileyo ihloselwe injongo eyahlukileyo.
Ngokuxhomekeke kwifomathi ziqhelekile:
Iincwadana zolwazi lweengcango ezisongayo ziyifomathi engekho kakhulu kwiinkampani ezininzi. Yintoni le ibangelwa yintoni? Ewe, ngokungathandabuzekiyo kungenxa yoyilo lwayo kunye nexabiso lezoqoqosho elithwala emva kokushicilelwa kwayo. Iindleko zabo ziphezulu kwaye ke ziqhele ukusetyenziswa kumacandelo afana neendawo zokutyela eziphezulu okanye iinkampani ezityala imali eninzi kwiimveliso zazo.
Ngokuqhelekileyo ziyilwe ngeendlela ezimbini: amacandelo amane okanye asibhozo kwaye zihlala zifanelekile ukuba into oyifunayo kukusebenzisa izixhobo zegraphic eziguqula isithuba ngendlela ebaluleke ngakumbi, njengomfanekiso omkhulu okanye umzekeliso othatha indawo enkulu yefomati.
I-triptych yifomathi engaqhelekanga, ibonakala ngokwahlulwe, njengoko igama layo libonisa, ibe ngamacandelo amathathu kwaye aluncedo kakhulu ukuba oko kujongwe kukwahlula nokusasaza ulwazi ngendlela ecacileyo nelungelelanisiweyo. Singayifumana ngeendlela ezininzi kodwa eyona ixhaphakileyo kukuyifumana ikwimo yamacandelo amathathu okanye amathandathu.
Ngamafutshane, ukuba into oyikhangelayo yincwadana enemifanekiso eneenkcukacha ezisasazwe ngcono kakhulu kwaye enendawo eyaneleyo, ungasoloko ukhetha olu hlobo lwefomati. Ukongeza, unokuzifumana ngobukhulu obahlukeneyo ngokuxhomekeke kubungakanani bolwazi kunye nezinto ofuna ukuzongeza kwincwadana yakho.
Njengee-triptychs, amaphecana akwayincwadana eqhelekileyo ezidla ngokuxatyiswa kakhulu kumacandelo okanye iinkampani ezahlukeneyo. Umahluko kukuba ezi ziyilwe ngendlela yokuba zahlulwe zibe ngamacandelo amabini.
Olu hlobo lwencwadana ludla ngokwahlulwa lube ziinxalenye ezine, oko kukuthi, luquka iqweqwe elingaphambili, elingemva namacandelo amabini adla ngokuba ngangaphakathi. Eyona nto ibalaseleyo kwezi ncwadana zinemifanekiso kukuba inkcazelo isasazwe bhetele ngakumbi, nto leyo enikela ufundo olumnandi ngakumbi.
Lolona hlobo lufanelekileyo lwencwadana ukuba into oyikhangelayo kukuba unendawo eyaneleyo yokubonisa lonke ulwazi kunye nokwahlulwa kwemixholo eyahlukeneyo ofuna ukuyinikezela, kwenzeka okufanayo ngee triptychs esizikhankanye ngaphambili.
Olu hlobo lwencwadana yenye yezona zinto zidala kakhulu, singasathethi ke ukuba yeyona nto idala ngenxa yoyilo lwayo, olukwimo ye-z okanye njengoko igama layo libonisa, ngendlela ye-zig zag. Yincwadana ephawulwe ngokuqulatha amacandelo amathandathu kwaye kudla ngokuba luncedo kakhulu ukwenza ulwazi oluqulathe imizobo okanye imifanekiso yeempawu.
Ngokomzekelo, ngokuqhelekileyo idlala indima yemephu okanye isikhokelo, ekubeni imilo yayo ifanelekile ekunikezeni umsebenzisi ulandelelo lwalo lonke ulwazi oluqikelelweyo.
Iiflaya okanye iiflaya
Amaphecana okanye iiflaya zidla ngokuba ziincwadana eziphawulwa yinyaniso yokuba umfanekiso okanye i-iconography eprintiweyo kubo iba ngabalinganiswa abaphambili kwisicatshulwa, oko kukuthi, ngokuqhelekileyo ziincwadana apho ubuninzi bolwazi bunqongophele kwaye apho umfanekiso uphumelela ngakumbi.
Ekuqaleni sinokuthi sithetha ngeepowusta, kodwa nangona zinenkcazo efanayo, zigcina iiyantlukwano ezithile. Ngokuqhelekileyo banemilo yesikwere okanye uxande, kodwa ngokungafaniyo neepowusta, ezi zihlala zisetyenziselwa iinjongo zorhwebo kuphela, oko kukuthi, ukubonisa ukuthengisa okuzayo okanye amaxabiso ancitshisiweyo, ukuba sithetha ngamacandelo afana neevenkile zempahla.
Ngamafutshane, ukuba into oyifunayo kukubamba ingqalelo yomthengi ngento emfutshane kwaye elula, iflaya yiyo yonke into oyifunayo.
Ipowusta ichazwa njengoluhlobo lwencwadana eprintiweyo, edla ngokuba nesikwere okanye imilo yoxande kwaye idla ngokuprintwa ngokobukhulu obahlukeneyo. Uninzi lweenkampani okanye amashishini aprinta iipowusta zawo ngokweesayizi ze-A3 okanye ze-A2. Zinobukhulu obukhulu, njengoko zifezekisa intsimi ebonakalayo ephakamileyo kuye wonke umntu ozijongayo.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ziincwadana apho umfanekiso ungumlinganiswa oyintloko, yingakho kubalulekile sebenzisa izibonelelo zegraphic ezibonwayo ezibonisa umdla kumbukeli: Iintlobo zochwethezo zangoku kunye nezobuchule, imibala engqindilili okanye kulula ukuyichonga imifanekiso kunye nemifanekiso.
Uninzi lwamacandelo asebenzisa olu hlobo lwefomathi okanye incwadana ziivenkile zemidlalo yevidiyo, iibhodi zemiboniso bhanya-bhanya apho iimuvi zibhengezwa khona, iithiyetha okanye nokuba unenjongo yokubhengeza nayiphi na imisebenzi yentlalo.
IiNkqubo zoYilo lwencwadana
Nje ukuba sikubonise ezinye zezona zisetyenziswa kakhulu kwaye zibonwe imizekelo yeencwadana ezinemifanekiso, sikushiya ngesikhokelo esincinci apho unokufumana khona usetyenziso okanye izixhobo zokuqalisa ukuyila iincwadana zakho zokuqala ukusuka ekuqaleni.
Uyilo: I-InDesign yeye-Adobe kwaye isesinye sezona zixhobo zibalaseleyo zokufunda indlela yokucwangcisa iikhathalogu okanye iincwadana. Enkosi kwisixhobo sayo sokubhaliweyo kunye neefomati ezahlukeneyo zoshicilelo ezinikezelayo, uya kukwazi ukwenza iincwadana zakho zokuqala. Ukongeza, unokwenza iigridi ukuze usasaze lonke ulwazi oluyimfuneko ngendlela enocwangco kakhulu.
Canva: Ukuba ujonge ukhetho lwasimahla, ungakhetha iCanva, umhleli we-intanethi onamawaka kunye namawaka eetemplates apho unokukhuphela kwaye uziguqule njengoko ufuna. Sesinye sezixhobo zeenkwenkwezi ukuba uqala kwihlabathi loyilo.
I-Microsoft Word: Ukuba ungumthandi weMicrosoft kunye nomthandi woyilo lokuhlela, awunakuphoswa sesi sixhobo apho unokwenza khona iitekisi zakho zokuqala, kwaye uzame phakathi kwepakethi yayo yeefonti ezahlukeneyo kwaye uzivumele uthathwe ziifomathi zayo ezahlukeneyo. Lukhetho oluncinci lwasimahla kuba lufuna intlawulo yenyanga okanye yonyaka, kodwa ixabiso lifanelekile kuba libonelela ngeetemplates ezinomdla ukuqala ukuhlela.
Iincwadana ezinemifanekiso ziya kubakho kubomi bethu bemihla ngemihla, ngoko kubalulekile ukuba wazi iimpawu zabo kunye nemizekelo eyahlukeneyo ekhoyo. Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi ngolu hlobo lwendawo yentengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iincwadana ezinemifanekiso